iOS 11 အကြောင်းသိထားသင့်သမျှ အိုင်ဖုန်းသတင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏သဟဇာတဖြစ်သော iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုနောက်ဆုံးပေါ် iOS 11 ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည့်နေ့ရောက်လာပြီ။ တစ်ခုတွင်ဗားရှင်းတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအင်္ဂါရပ်အသစ်များစွာယူဆောင်လာသည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသည့်အပြင်အဆင်အရမူရင်းအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်သိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှုကိုပြသသည်။ အက်ပ်ဂီတအက်ပ်တွင်။ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာသင်ကသူတို့ကိုယူဆောင်လာတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဗီဒီယိုမတူပါ။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အရာကိုနှင့်အတူမွမ်းမံခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးပါ.
ဒီဆဌမဗားရှင်း iOS အထူးသဖြင့် iPad ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်iOS 11 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးသည့်နောက်တွင် application dock၊ multitasking တိုးတက်လာခြင်း၊ application များအကြားပုံရိပ်များသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဆွဲချခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းစွမ်းရည်နှင့်အတူ Apple Pencil နှင့်အတူတကွလက်တွေ့အသုံးဝင်မှုအပြင်၎င်းကို iOS XNUMX သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ယခုအချိန်အထိကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုပိုမိုပေးလိမ့်မည်။ အိုင်ပက်ပေါ်ရှိအက်ပဲလ်မှဇာတိဂေဟစနစ်။
1 iPhone အတွက် iOS 11 မှာဘာအသစ်တွေရှိသလဲ
1.4 အသုံးမလိုသော application များကိုဖယ်ထုတ်ပါ
1.5 မက်ဆေ့ခ်ျများကို iCloud နှင့်တိုက်ဆိုင်ညှိယူထားသည်
1.8 Wifi ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ
1.9 Facebook နှင့် Twitter သို့နှုတ်ဆက်သည်
1.10 App Store အသစ်
1.11 ဂဏန်းတွက်စက်အသစ်နှင့် Podcast app
1.13 သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တိုးချဲ့ mode ကို
1.15 Dock icon များသည် app စာသားကိုမပြပါ
1.18 Record မျက်နှာပြင်
1.20 Apple Watch အတွက်နာရီမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးပါ
1.21 အဆိုပါ reel အပေါ် GIFs များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
1.22 Live Photos များသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုထင်ရှားသည်
1.24 QR သဟဇာတ
1.25 Setting မှကိရိယာကိုပိတ်ပါ။
1.26 လူတိုင်းအတွက် NFC
1.28 Siri အတွက်ပိုပြီးသဘာဝအသံ
1.29 Siri မှအချိန်နှင့်တပြေးညီဘာသာပြန်ဆိုခြင်း
1.30 Siri ကိုရေးပါ
1.31 သင်၏ Apple Music သူငယ်ချင်းများထံအတင်းအဖျင်း
2 iPad အတွက် iOS 11 တွင်ဘာအသစ်များရှိသလဲ
2.3 Multitasking အသစ်
2.5 Apple Pencil သည်လက်တွေ့ကျကျမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
2.6 QuickType ကီးဘုတ်အသစ်
3 iPhone X, iPhone 11 နှင့် iPhone 8 Plus များအတွက်သီးသန့် iOS 8 တွင်အသစ်များ
4 iOS 11 ကိုမွမ်းမံနည်း
4.1 အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြစ်ရာကနေ install?
4.2 iOS 11 ကိုမတပ်ဆင်မီသတိရရမည့်အရာများ
5 IOS 11 သဟဇာတထုတ်ကုန်
5.1 iad 11 နှင့်လိုက်ဖက်သောအိုင်ပက်ဒ်မော်ဒယ်များ
5.2 IOS 11 သဟဇာတဖြစ်သော iPhone မော်ဒယ်များ
5.3 iod 11 နှင့်လိုက်ဖက်သော iPod touch ပုံစံများ
iPhone အတွက် iOS 11 မှာဘာအသစ်တွေရှိသလဲ
iOS 11 သော့ခတ်မြင်ကွင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်အသိပေးချက်များသာမကဘဲသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုယခုအချိန်တွင်မပေးနိုင်ပါ ကျွန်တော်တို့ကိုလတ်တလောနှင့်ကျွန်တော်ဆိုင်းငံ့သောသူတို့အားပြသထားတယ် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ချောင်းကိုဆွဲယူ။
iOS 11 သည်မောင်းနှင်မှုစနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့ကကားမောင်းနေသည်ကိုသိသောအခါ မည်သည့်ခေါ်ဆိုမှု, မက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်သတိပေးချက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြား။
Apple က iPad keyboard ကိုအသစ်ပြန်လုပ်လိုက်သလိုမျိုး iPhone အတွက်လည်းအလားတူလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးစရာရှိပါတယ် ဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ညာအက္ခရာများရွှေ့, ငါတို့ကပိုမိုလွယ်ကူကျွန်တော်တို့ကိုတ ဦး တည်းလက်ဖြင့်ရေးသားဖို့။
အသုံးမလိုသော application များကိုဖယ်ထုတ်ပါ
သင့်အနေဖြင့်များစွာသောသူတို့သည်တစ်ပတ်အတွင်းသင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စမ်းသပ်ရန် applications များစွာကို download လုပ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်၎င်းကိုအခြားအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရန်သင်စီစဉ်ထားပါက၎င်းကိုသင်မဖျက်ပစ်ပါ။ iOS 11 ကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားသည် ငါတို့ခဏအသုံးမပြုခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါဟုတ်ကဲ့၊ အချက်အလက်အားလုံးကိုတစ်ချိန်ချိန်တွင်၎င်းကိုပြန်လည်ရယူလိုပါကသိမ်းဆည်းသည်။
မက်ဆေ့ခ်ျများကို iCloud နှင့်တိုက်ဆိုင်ညှိယူထားသည်
Apple Messages app နောက်ဆုံး iCloud နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်ပြီ မည်သည့်ထုတ်ကုန်မှမဆိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သောနှင့်လက်ခံသောမက်ဆေ့ခ်ျအားလုံးကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
El ဂေဟအကျိုးသက်ရောက်မှု မျက်နှာပြင်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျစာသားနှင့်ဖြည့်စွက်သည် အာရုံစူးစိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစာသားကိုဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာမီးမောင်းထိုးပြသလိုမျိုးပြသထားတယ်။
ဒီဗားရှင်းအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ် iCloud keychain တွင်သိမ်းထားသောစကားဝှက်များအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုပြုပြင်လိုပါက၎င်းတို့နှင့်တိုင်ပင်ပါသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သူငယ်ချင်းများနှင့် Wifi စကားဝှက်ကိုမျှဝေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ပြောရန်မလိုပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် သော့ကိုအလိုအလျောက်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ် ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲသင်၏စက်ကို configure လုပ်ရန်
Facebook နှင့် Twitter သို့နှုတ်ဆက်သည်
Facebook နှင့် Twitter ၎င်းတို့ကို iOS တွင်ရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီလူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာတိုက်ရိုက်မျှဝေချင်တယ်ဆိုရင် application တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။
App Store အသစ်
Apple မှာရှိတယ် App Store ကိုလုံးဝဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည် ဗီဒီယိုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးများ၊ နေ့စဉ်ပုံပြင်များကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များ၊ အထူးသီးသန့်ဂိမ်းများစာရင်း၊ အပလီကေးရှင်းစာရင်းများထည့်သွင်းခြင်း။
ဂဏန်းတွက်စက်အသစ်နှင့် Podcast app
ဂဏန်းတွက်စက်နှင့် Podcast application နှစ်ခုလုံးသည်aကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ပုံစံပြောင်းထားသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်း။
ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဂိမ်းများကစားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် HUD အသံပမာဏကိုပြောင်းလဲလိုပါက ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတက်ယူခဲ့ပါတယ်။ Apple I ကအရွယ်အစားကိုသိသိသာသာလျှော့ချပြီး၎င်းသည်သိပ်ပြီးမပြင်းထန်ပါ။
သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တိုးချဲ့ mode ကို
iPhone ကိုပထမဆုံးအကြိမ် configure လုပ်တဲ့အခါမှာ Apple ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ် zoom mode မှာကျယ်ဝန်း icon တွေကို သို့မဟုတ်စံ။ ယခု zoom mode ကိုသော့ခတ်မြင်ကွင်းတွင်လည်းရနိုင်သည်။
လွှမ်းခြုံမှုအဆင့်ကိုညွှန်ပြသောအချက်များသည်လမ်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည် ရိုးရာဘား တစ်သက်တာ
Dock icon များသည် app စာသားကိုမပြပါ
အိုင်ကွန်များ၏နေရာလွတ်ကိုလျှော့ချရန် iOS ၏မူကွဲအသစ်ဖြစ်သည် လျှောက်လွှာများ၏အမည်ကိုမပြပါ သောအထိုင်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အသစ်နှင့်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထိန်းချုပ်ရေးစင်တာကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ကျနော်တို့ထဲမှာပေါ်လာချင်သောဒြပ်စင်တည်စေမီနူးများကို ၀ င်ရန်မလိုပဲ၎င်းကိုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် iOS အသုံးပြုသူများအကြိုက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပျော်မွေ့ရန် jailbreak ကိုအသုံးပြုရန်ဖိအားပေးခံရသော်လည်း screen ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လုပ်ဆောင်ချက်ကဲ့သို့ပင် jailbreak မှီခိုမှုသည်တဖြည်းဖြည်းကုန်သွားသည်။ ဒီ Control Centre အသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂီတဖွင့်စက်ကိုလည်းပြသထားတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင် Control Control Center ရဲ့ iOS version ကနေ ၀ င်းဒိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးသွားစရာမလိုတော့ဘူး။
3D Touch နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ iPhone 6s မှလက်နှိပ်ဓာတ်မီး၌အဆင့်ဆင့်သုံးဆင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။ iOS 11 မှာအဆင့်အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ပြီ ကျနော်တို့စုစုပေါင်း4ရရှိနိုင်ရှိသည်.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်ပါက jailbreak သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအတွက် third-party application များကိုအသုံးပြုရမည်။ သို့သော် iOS 11 ဖြင့် Apple ကကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် မျက်နှာပြင်အသံသွင်းပါ တိုက်ရိုက်စက်ကိုယ်တိုင်ကနေ။
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စခရင်ရိုက်ကူးသည့်အခါ၎င်းအပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိနပ်သို့လည်ပတ်။ တည်းဖြတ်ရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။ ဖမ်းယူပြီးတဲ့နောက်အခုမှပိုရှင်းသွားပြီ ကျနော်တို့ကဖြတ်သို့မဟုတ်မှတ်စာ add ဖို့ကတည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ် ငါတို့အဲဒီအချိန်မှာလိုတယ်
Apple Watch အတွက်နာရီမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးပါ
ဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းမှကမ်းလှမ်းသောမျှဝေခြင်းရွေးချယ်မှုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည် နယ်ပယ်တစ်ခုဖန်တီးပါ ငါတို့လိုချင်တဲ့ပုံရိပ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်။
အဆိုပါ reel အပေါ် GIFs များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
GIFs ဟာအခုအချိန်မှာလိုအပ်နေတာကို Apple ကအသိအမှတ်ပြုဖို့တော်တော်များများယူခဲ့ရတယ်။ ဒီဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူငါတို့နောက်ဆုံးတော့နိုင်ပါလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံ reel မှသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။
Live Photos များသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုထင်ရှားသည်
iPhone 6s ကလာတဲ့ဒီအဆုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုသေးသေးလေးတွေဖန်တီးခွင့်ပေးတယ် ကွင်းဆက်, တုံသို့မဟုတ်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှု။
အကယ်၍ iOS 10 တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောစစ်ထုတ်ကိရိယာအနည်းငယ်သာရှိခဲ့လျှင်၊ ဤဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ပါဝင်သည် ဂန္ထဝင်ဓာတ်ပုံပညာဖြင့်မှုတ်သွင်းသောစစ်ထုတ်ကိရိယာများ ထိရောက်သောသဘာဝအသားအရေများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်။
iOS 11 ပါသော iPhone ကင်မရာသည်စွမ်းဆောင်နိုင်သည် အလိုအလျောက် QR ကုဒ်များကိုအသိအမှတ်မပြု third-party applications များ install လုပ်စရာမလိုဘဲ, သူကညွှန်ကြားထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပြသ။
အစပိုင်းတွင်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်မည်မဟုတ်သော်လည်းအက်ပဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Setting မှ Device ကိုပိတ်ပါ အိုင်ပက်ဒ်၊
iOS 11 သည် NFC chip ဖွင့်ပွဲ ငါတို့ရဲ့ iPhone အတွက်ဒီနည်းပညာကိုသုံးပြီးအခြားကိရိယာတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။
Notes application သည် Apple သည် iOS ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများတွင်အများဆုံးဂရုပြုသည့် application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အခု ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဇယားများဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်စက်သင်ကြားခြင်း၏ကျေးဇူးကြောင့် Siri သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ပို၍ သဘာဝအသံကိုပေးသည် ဖော်ပြမှုကိုရယူပါ သူမကစက်ရုပ်လိုလိုသူနဲ့စကားပြောဖို့မလိုပါဘူး။
iOS 11 ဗားရှင်းသစ်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အသစ်အဆန်းများအနက်တစ်ခုမှာခွင့်ပြုသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည် သင်ကြားသမျှအားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဘာသာပြန်ဆိုပါ အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီနှင့်ဂျာမန်အထိလည်းကောင်း၊
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့တွင် Siri ကိုမေးမြန်းရန်လိုအပ်သော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိဆူညံသံများကသူနှင့်သူမနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ iOS 11 အသုံးပြုလို့ရပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရေးပါ
သင်၏ Apple Music သူငယ်ချင်းများထံအတင်းအဖျင်း
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဂီတအားလုံးကိုရယူနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများသည် Apple Music တွင်မျှဝေခဲ့ကြသည် သူတို့မကြာခဏနားထောင်အယ်လ်ဘမ်များနှင့်ဘူတာရုံအပြင်။
ဤဒုတိယ AirPlay နည်းပညာ၏ဗားရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ရှိအသံစနစ်တစ်ခုစီ၌ဖွင့်ထားသည့်အရာများအားလုံးကိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းညှိခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လွတ်လပ်သောလမ်းအတွက်။
iPad အတွက် iOS 11 တွင်ဘာအသစ်များရှိသလဲ
နောက်ဆုံးပေါ် iPad Pro မော်ဒယ်များကိုထုတ်ဝေပြီးနောက် Apple သည်စိတ် ၀ င်စားမှုအလွန်များပြားစေသောမော်ဒယ်လ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အများပြည်သူ၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုဆွဲဆောင်နေသည်ဟုထင်ရသည့်အတွက်၊ တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားဗားရှင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အာရုံစိုက်ပါပြီအနည်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာတော့အက်ပဲလ်အိုင်ပက်ဒ်က iPhone နဲ့တူပေမယ့်ကြီးမားတယ်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းညည်းတွားမြည်တမ်းကြတဲ့သုံးစွဲသူများကိုနောက်ဆုံးမှာသင်နားထောင်နေပါပြီ။
iOS 11 သည်ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကို iPad Pro နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါ Apple Pencil သည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုများစွာရရှိခဲ့သည် ကိရိယာတခုဖြစ်လာတယ် ရှိရမည် သုံးစွဲသူတိုင်းမှာ iPad Pro မော်ဒယ်ရှိရင်ဝယ်သင့်တယ်။ iOS 11 သည် iPad အတွက်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်အတွက်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ရေတိုတွင်၊ များစွာသောအားဖြင့်အနည်းဆုံးအသုံးပြုထားသောအိမ်များတွင်ကွန်ပျူတာများစွာကိုစတင်အစားထိုးနိုင်သည်။
အက်ပဲလ်ရဲ့ iOS ဂေဟစနစ်မှာဖိုင်မန်နေဂျာတစ်ယောက်ရှိခြင်းဟာသုံးစွဲသူများစွာရဲ့အိပ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ File application မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် iCloud မှာသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်တွေအားလုံးကိုကြည့်လို့ရပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့ Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive တွင်သိမ်းထားသောဖိုင်များ, Adobe Creative Cloud ... နှင့်လျှင်မြန်စွာဖွင့်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ် သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးတွင်ရှာဖွေမှုများ အတူတကွဤအမျိုးအစားတစ်ခုထက်ပိုသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများသည်အလွန်တန်ဖိုးထားမည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမကြာသေးမီကဖွင့်ခဲ့သောဖိုင်များ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ဖျက်ပစ်လိုက်သောဖိုင်များကိုလျှင်မြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်သည့်ခလုတ်တစ်ခုကိုလည်းပေးထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုလွယ်ကူသည့်နည်းဖြင့်ရှာဖွေရန်ဖိုင်များသို့ tags များထည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုပေးထားသည်။
Application များအတွက် Dock သည်ဤစက်အမျိုးအစားအတွက်အသုံးပြုသူများ၏နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့် application မှမဆို Dock ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းရနိုင်သည် သင်၏လက်ချောင်းကိုတက်လျှောနောက်ဆုံးပိတ်ထားသော application များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းနှင့်ပြလိမ့်မည်။
အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအက်ပ်တွင်ဖွင့်သောအခါတစ်ချိန်တည်းတစ်ခုထက်ပိုသော iOS 11 အထိကျွန်ုပ်တို့လက်ချောင်းကို၎င်းမျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အခြမ်းသို့လျှောကျသွားရသောအခါ၊ iOS ကိုသုံးပြီး Dock ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ချင်သော application ကိုနှိပ်ပါ အဲဒါကိုငါတို့လိုအပ်တဲ့ဘက်မှာထားမယ်၊ ဘယ် (ညာ) ပဲဖြစ်စေ။
Apple ကအနာဂတ်မှာတစ်ချိန်ချိန်တွင် iPads များသည်ပေါ့ပါးသော macOS version ကိုအသုံးပြုမည်ဟူသောသတင်းကိုမကြားလိုပေ။ ဤသို့ပြုရန်၎င်းသည်ထည့်သွင်းခြင်းများကိုရပ်တန့်ခြင်းမရှိသောကြောင့်များစွာသောခြေလှမ်းများလိုအပ်သော mouse lovers များသည်အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလက်လွတ်မသွားစေနိုင်ပါ။ drag and drop လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပမာအားဖြင့်ပူးတွဲပုံပါသောအီးမေးလ်ကို၎င်းတည်ရှိရာ browser မှဆွဲယူသွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည် အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များအကြားပုံများသို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုဆွဲယူပါ လျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူ။
Apple Pencil သည်လက်တွေ့ကျကျမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
Apple Pencil သည် iOS 11 တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည် ၎င်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ စွယ်စုံနှင့်သဘာဝဖြစ်သည်မှတ်စုများရေးခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ PDF ဖိုင်တစ်ခုတွင်မှတ်ချက်များရေးခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများစွာအတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လက်ခံသူထံပေးပို့ခြင်းအပြင်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်သည်။
iPad ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုရိုက်ရန်အတွက် Apple သည် QuickType ကီးဘုတ်ကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးနံပါတ်များနှင့်အထူးအက္ခရာနှစ်မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏လက်ချောင်းကိုသော့ပေါ်တွင်ချထားသည် ကွဲပြားခြားနားသောကီးဘုတ်များအကြားပြောင်းလဲရန်မလိုပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောဆိုင်းဘုတ်များသို့မဟုတ်နံပါတ်များဖြစ်သည်။
iPhone X, iPhone 11 နှင့် iPhone 8 Plus များအတွက်သီးသန့် iOS 8 တွင်အသစ်များ
အိုင်ဖုန်းအသစ်များရရှိခဲ့သည့်အကောင်းဆုံး၊ အထူးသဖြင့် iPhone X ၏ရှေ့ကင်မရာ၊ ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သော iOS 11 ဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတူအလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများထည့်ပါ ဒါကြောင့်သူတို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်ပူဇော်။
ဒီ feature iPhone X ပေါ်တွင်သာရနိုင်သည်Emojis များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အမူအယာများနှင့်သက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သည့်အတွက်ဤကိရိယာတွင်သာရရှိနိုင်သော TrueDepth ကင်မရာရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒီကင်မရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အသုံးများဆုံးကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု ၅၀ ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Apple က Animoji ၁၂ ခုအထိရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဤတိုတောင်းသောဗွီဒီယိုများ၏ရလဒ်သည်မက်ဆေ့ခ်ျများအသုံးပြုသူများကိုကန့်သတ်ထားသည်။
iOS 11 ကိုမွမ်းမံနည်း
Apple က iOS 11 နောက်ဆုံး version ကိုပထမနာရီများမှာထုတ်သောအခါ download လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်နာရီအနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်လူတိုင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်လည်ပတ်ရေးစနစ်၏လက်မှနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းကိုခံစားလိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နာရီအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနိုင်လျှင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးဖုန်းကိုဤမျှကြာအောင်မထားနိုင်ပါ။
iOS ၏မူကွဲနှစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည် download လုပ်ရန် iOS version အသစ်ရှိမရှိကိုအလိုအလျောက်စစ်ဆေးသည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးဗားရှင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက Settings အိုင်ကွန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ ရယူ၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားစာတစ်ခုပြလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်မစောင့်လိုပါက Settings> General> Software update ကိုသွားရပါမည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်အသစ်ပြောင်းလဲမှုပေါ်လာလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်သင်ပြုပြင်ပြီးသော application များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားအရာများဖြင့် update လုပ်ပါ update ကိုပြီးဆုံးသည်နှင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပြproblemနာကသင်၏စက်ကိရိယာလည်ပတ်မှုမလုံလောက်လျှင်သင်အခိုက်အတန့်၌သင်ကြုံတွေ့ရသောပြallနာများအားလုံးဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စများတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ terminal မှအချက်အလက်များကိုမိတ္တူကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် iCloud မှတဆင့်ဓာတ်ပုံများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားသူများဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုကိုခြစ်ရာကနေလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး iCloud မှအချက်အလက်အားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။
Application များကို download လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤ terminal ၏ App Store သို့ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုသွားပြီးဖြစ်သည် iTunes မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်နိုင်ပါဒီ၏နောက်ဆုံး update ကိုသောကြောင့်, အက်ပလီကေးရှင်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း (သို့) iOS မှစီမံသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းသို့လွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ iTunes နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအရန်ကူးထားသောကော်ပီတစ်ခုပြုလုပ်ရန်၊ အကြောင်းအရာအားလုံးကိုအတူတကွပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုသည့်မိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် backup တစ်ခုပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားနေပါက iOS 11 ကိုခြစ်ရာကနေ install လုပ်ပြီး backup ကိုတင်ရန်စဉ်းစားလျှင်၊ Terminal မှတိုက်ရိုက် update လုပ်သည့်အလားပြproblemနာကြုံတွေ့ရလိမ့်မည် အချို့ application များ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုသက်ရောက်စေနိုင်ပြီး terminal ကိုနှေးစေနိုင်သောအချက်အလက်များအားလုံးသည် iOS version အသစ်အတွက်ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ၊ အသစ်ထပ်မံမပြုလုပ်မီမူရင်းအခြေအနေသို့ကိရိယာကိုမူလအတိုင်းပြန်ထားနိုင်ရန်အထောက်အကူပေးမည့်မိတ္တူတစ်ခုပြုလုပ်ရပါမည်။ အကယ်၍ iOS ဗားရှင်းသစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်သင့်ကိုမယုံကြည်သလိုသင်စောင့်ဆိုင်းလိုလျှင် သင်ပထမ ဦး ဆုံးလက်ခံရရှိသည်။
iOS 11 ကိုမတပ်ဆင်မီသတိရရမည့်အရာများ
ပုံမှန်အတိုင်းနှင့် Apple သည် update တစ်ခုစီ၏နေရာလွတ်ကိုလျှော့ချရန်တတ်နိုင်သမျှပြုလုပ်သော်လည်းအံ့ဖွယ်အမှုများမလုပ်နိုင်ပါ အနည်းဆုံး 4-5GB အခမဲ့နေရာလိုအပ်သည်2GB လောက်သိမ်းထားသောနောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုမှန်ကန်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းနိုင်စေရန်သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်တင်ပါ။
IOS 11 သဟဇာတထုတ်ကုန်
iad 11 နှင့်လိုက်ဖက်သောအိုင်ပက်ဒ်မော်ဒယ်များ
၁၂.၉ လက်မပထမနှင့်ဒုတိယမျိုးဆက် iPad Pro ။
iPad Air 1 နှင့် 2
iPad 2017 - ၅ မျိုးဆက်
iPad Mini 2,3နှင့်4။
IOS 11 သဟဇာတဖြစ်သော iPhone မော်ဒယ်များ
iod 11 နှင့်လိုက်ဖက်သော iPod touch ပုံစံများ
iPod touch 6th မျိုးဆက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 11 အကြောင်းသိထားသင့်သမျှ
Sony က ဟုသူကပြောသည်
သင်နှစ်သက်သောအကြိုက်များသို့သင်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါကသင်ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ဖုန်းကိုရွေးချယ်ပါကအဘယ်ကြောင့်မသိသော application ကိုထည့်လေ့မရှိ။
iOS 11 အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏ iPhone6တွင်တိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများရိုက်ယူနိုင်ပါသလား။
ဂျိုးဇက်အန်တိုနီအိုအစ္စလာမ် GARCIA ဟုသူကပြောသည်
IOS 11 ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် search engine သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်ပြက္ခဒိန်ကိုသွားပြီး၊ စကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသောအဖြစ်အပျက်များကိုရှာဖွေရန်သူ့ကိုပြောပါ။ 8 ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါက2ကိုရှာတယ်။ ၂ ဒါက iPhone7Plus နဲ့ IPAD တို့လိုဖြစ်တတ်တယ်။
JOSE ANTONIO ISLA GARCIA သို့အကြောင်းပြန်ပါ
Apple Watch Series3နှင့် Series2တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ